သိပျခဈြလား … လကျလှတျပေးလိုကျပါ – Shinyoon
သိပျခဈြလား … လကျလှတျပေးလိုကျပါ
ဘယျသူ့မှာမဆို ကိုယျခဈြရတဲ့သူကို ပိုငျဆိုငျလိုတဲ့အတ်တတှရှေိတတျကွသလို ဆုံးရှုံးရမှာကွောကျတတျကွတယျ ဒါ ဖွဈလဖွေ့ဈထမဟုတျပဲ ဒါကိုက သဘာဝပါ ကိုယျသူ့ကို ခဈြမိပွီဆိုကတညျး သူနဲ့ပဲ သကျဆုံးတိုငျလကျတှဲခငျြခဲ့တာကတော့ ဆန်ဒပေါ့ ..
ဒါပမေယျ့ ခဈြတိုငျးလဲ မညားတဲ့ ဇာတျလမျးတှေ အမြားကွီးရှိခဲ့သလို ဆကျပွီးလဲ ရှိနဦေးမယျထငျပါတယျ … အခဈြ နှဈဦးနှဈဖကျလုံးက ထပျတူထပျမြှခဈြနရေငျ တကယျခဈြမိတဲ့သူမှာ ရှငျနရေဲ့နဲ့ သရေတတျတယျ .. အိပျမကျတှေ သရေတယျ … မြှျောလငျ့ခကျြတှေ သရေတယျ
သူ မရှိတော့ရငျလို့တှေးပွီး ကွောကျနတေတျတဲ့စိတျလေးကွောငျ့ သူရှိနရေုံနဲ့ဖွဈပါတယျဆိုပွီး ရူးရူးမိုကျမိုကျတှေ တှေးပဈလိုကျတယျ ပွီးတော့ ဘယျလောကျပဲနာကငျြနာကငျြ ဆကျပွီး ဆှဲထားဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျတယျလေ … မပြျောတော့ရငျပွနျလာနျော မြှျောနမေယျတဲ့ တကယျပွောခဲ့ဖူးတယျ
ပြျောမယျထငျတဲ့အရပျကို ထှကျသှားတဲ့သူကို မြှျောနမေယျဆိုတဲ့အထိ ကြှနျမ ရူးခဲ့ဖူးတာပေါ့… ငိုအောငျလုပျတဲ့ သူ့ကို စိတျတှမေနာတတျခဲ့ပါပဲ ငိုနမေိတဲ့ကိုယျ့ကိုယျကိုပဲ မုနျးမိလာခဲ့မိတယျ … အဲ့လိုနရေ့ကျတှမြေားလာတဲ့အခါ တဈခုကို ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ …
ကြှနျမ သူ့ကို သိပျခဈြတယျ ဒါကွောငျ့ပဲ လကျလှတျလိုကျဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျတာပါ … ခဈြရငျဆကျပွီးဖကျတှယျထားရမှာ မဟုတျဘူးလားတဲ့ ကိုယျဖကျတှယျထားကွညျ့ခဲ့ဖူးပွီးပွီ ကိုယျအမြားကွီးနာကငျြခဲ့ရပွီးပွီ မကျြရညျတှနေဲ့လဲ တားခဲ့ဖူးပွီးပွီ
မထူးတော့တဲ့ ဇာတျလမျးမှာ သူ့ကိုသိပျခဈြတဲ့ စိတျလေးကုနျမသှားခငျ သူ့ကို မုနျးမိမသှားခငျ လကျလှတျပေးလိုကျဖို့ကို ရှေးခဲ့ရုံပါ … နာကငျြနပွေီလား ဒီထကျပိုပွီး နာကငျြလာတဲ့အခါ နာကငျြနတေဲ့ကိုယျ့ကိုယျကို မုနျးမိလာမယျ ပွီးရငျ သိပျခဈြတဲ့သူ့ကို မုနျးမိလာတော့မယျလေ ..
ဒါကွောငျ့ပဲ သိပျခဈြလား …. သိပျခဈြရငျ လကျလှတျပေးလိုကျပါ … သူလဲပြျောပါစေ ကိုယျလဲ လှတျလပျပါစပေေါ့ …
သိပ်ချစ်လား … လက်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ
ဘယ်သူ့မှာမဆို ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူကို ပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့အတ္တတွေရှိတတ်ကြသလို ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တတ်ကြတယ် ဒါ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမဟုတ်ပဲ ဒါကိုက သဘာဝပါ ကိုယ်သူ့ကို ချစ်မိပြီဆိုကတည်း သူနဲ့ပဲ သက်ဆုံးတိုင်လက်တွဲချင်ခဲ့တာကတော့ ဆန္ဒပေါ့ ..
ဒါပေမယ့် ချစ်တိုင်းလဲ မညားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ အများကြီးရှိခဲ့သလို ဆက်ပြီးလဲ ရှိနေဦးမယ်ထင်ပါတယ် … အချစ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးက ထပ်တူထပ်မျှချစ်နေရင် တကယ်ချစ်မိတဲ့သူမှာ ရှင်နေရဲ့နဲ့ သေရတတ်တယ် .. အိပ်မက်တွေ သေရတယ် … မျှော်လင့်ချက်တွေ သေရတယ်
သူ မရှိတော့ရင်လို့တွေးပြီး ကြောက်နေတတ်တဲ့စိတ်လေးကြောင့် သူရှိနေရုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ရူးရူးမိုက်မိုက်တွေ တွေးပစ်လိုက်တယ် ပြီးတော့ ဘယ်လောက်ပဲနာကျင်နာကျင် ဆက်ပြီး ဆွဲထားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လေ … မပျော်တော့ရင်ပြန်လာနော် မျှော်နေမယ်တဲ့ တကယ်ပြောခဲ့ဖူးတယ်
ပျော်မယ်ထင်တဲ့အရပ်ကို ထွက်သွားတဲ့သူကို မျှော်နေမယ်ဆိုတဲ့အထိ ကျွန်မ ရူးခဲ့ဖူးတာပေါ့ … ငိုအောင်လုပ်တဲ့ သူ့ကို စိတ်တွေမနာတတ်ခဲ့ပါပဲ ငိုနေမိတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ မုန်းမိလာခဲ့မိတယ် … အဲ့လိုနေ့ရက်တွေများလာတဲ့အခါ တစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် …
ကျွန်မ သူ့ကို သိပ်ချစ်တယ် ဒါကြောင့်ပဲ လက်လွှတ်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ … ချစ်ရင်ဆက်ပြီးဖက်တွယ်ထားရမှာ မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ ကိုယ်ဖက်တွယ်ထားကြည့်ခဲ့ဖူးပြီးပြီ ကိုယ်အများကြီးနာကျင်ခဲ့ရပြီးပြီ မျက်ရည်တွေနဲ့လဲ တားခဲ့ဖူးပြီးပြီ
မထူးတော့တဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာ သူ့ကိုသိပ်ချစ်တဲ့ စိတ်လေးကုန်မသွားခင် သူ့ကို မုန်းမိမသွားခင် လက်လွှတ်ပေးလိုက်ဖို့ကို ရွေးခဲ့ရုံပါ … နာကျင်နေပြီလား ဒီထက်ပိုပြီး နာကျင်လာတဲ့အခါ နာကျင်နေတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို မုန်းမိလာမယ် ပြီးရင် သိပ်ချစ်တဲ့သူ့ကို မုန်းမိလာတော့မယ်လေ ..
ဒါကြောင့်ပဲ သိပ်ချစ်လား …. သိပ်ချစ်ရင် လက်လွှတ်ပေးလိုက်ပါ … သူလဲပျော်ပါစေ ကိုယ်လဲ လွတ်လပ်ပါစေပေါ့ …
မခဈြတော့တာလား ဒါမှမဟုတျ ခဈြပဲမခဈြခဲ့တာလား …
အနဝေေးရငျ သှေးအေးတယျတဲ့လား …